बन्दलाई सदाको लागि बन्द गरौं बन्दकर्ताज्यू ! – तर्क शास्त्र
July 24, 2015 July 28, 2015 Deep Jyoti Leaveacomment
भनिन्छ खबरदारी गर्न पाउनु लोकतन्त्रको सुन्दरता हो रे ! आज पनि सायद लोकतन्त्रको यही सुन्दरतालाई पछ्याउदै हो कि के हो राजनीतिक दलको एउटा समूहले खबरदारी स्वरूप नेपाल बन्द गरे । बन्द गर्नुको कारण राष्ट्रवादी मुद्दा रहेको बताउदैछन् बन्दकर्ताहरु । चौतर्फी आवाजहरु उठ्दैछन् मुद्दा ठिक भएपनि तरिका सहि भएन कि भनेर । आज फेसबुक र ट्वीटरका भित्ताहरु भरिएका छन् बन्द विरोधी अक्षरहरुले । यो भन्नुको अर्थ यो होइन कि हामी सबै यो मुद्दालाई सपोर्ट गरिरहेका छैनौँ, हाम्रो पनि यो मुद्दामा साथ छ तर जुन तरिकाले यो मुद्दालाई उठाईएको छ त्यसको भने हामी कदापी साथमा छैनौँ बन्दकर्ताज्यू !
देशको माया हामीलाई पनि छ, चिन्ता हामीलाई पनि छ तर जुन कुराले कहिल्यै विकल्प दिन सक्दैन त्यसको पछि हामी तपाईंको कार्यकर्ताहरु जस्तो अन्धभक्त भएर किन हिड्ने ? हामीलाई पनि ज्ञान छ सहि के हो गलत के हो भनेर । ल मानिलिउ हामीले तपाईंको यो बन्दलाई सपोर्ट गर्यौं रे तर के ग्यारेन्टी छ तपाईंले यो मुद्दा सल्टाउन सक्नुहुन्छ भनरे ? समस्या एकातिर छ अनि अर्कोतिर ध्यान दिएर, हिंसा-उद्दण्ड मच्चाएर कहाँ हुन्छ समस्याको समाधान ?
सुन्दै छु राष्ट्रवादी मुद्दाको नाममा गरिएको तपाईंको बन्दमा आज कैयौं गाडीमा आगजनी गरियो रे, कतै चालकलाई ट्याक्सी भित्रै राखेर आगो पनि लगाइयो रे ! के यसरी राष्ट्रवादी भइन्छ त बन्दकर्ताज्यू ? यदि यसरी राष्ट्रभक्त भइन्छ भने म त आजैदेखि राष्ट्रभक्त हुन छोडिदिन्छु किनकि देशभक्तिको नाम बेचेर मलाई अरुलाई कदापी दु:ख दिनु छैन ।
भर्खरै भूकम्पको लामो भ्याकेसन पछि जनजीवन साधारण बन्दै गईरहेको अवस्थामा फेरि अनेक बहानामा मौलाउँदै गरेको यो बन्दले जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भईरहेको छ । सायद त्यो त यहाँले अनुभूति गर्नु नै भएको होला । भूकम्पले देशको विकास धेरै वर्ष पछाडी धकेलिएको छ । हामीलाई फेरि पहिलाको स्थितिमा फर्किन समयको एक एक पल आवश्यक परिरहेको छ । तर यस्तो बेलामा तपाईंहरु भने के के कारण देखाएर अनावश्यक बन्द गरिरहनुहुन्छ । यस्तो माहोलमा तपाईं हामीले देखेको यो सपना के सम्भव होला त ? यो नभुल्नुहोस् बन्द विकासको बाधक हो ।
यो कदापी राम्रो संकेत होइन । जुन कुरामा जनताको साथ छैन त्यसमा तपाईंहरुको हार निश्चित छ । विरोध गर्नुहोस् तर शैली परिवर्तन गर्नुहोस् । केहि युवाहरु कार्यकर्ताको रुपमा तपाईंको अघिपछि लागे पनि अब बिस्तारै बिस्तारै अर्को जमातको तन्नेरी पुस्ता र नागरिक समाजहरुले यसको विरोधमा आवाज उठाउन सुरु गरिसकेका छन् । समयमै विचार गर्नुहोस् नत्र बन्दको विकल्पको सुझाव दिँदादिँदै फेरि यस्तो समय नाओस् कि यही पुस्ताले नै तपाईंहरुको नै विकल्प खोज्नुपरोस् ।
तपाईंले मात्र होइन अहिलेसम्म जो-जोसले जुन जुन नाममा बन्द गर्दै आईरहेका छन् तपाईंलाई अवगत गराउँ कसैले पनि जनताको साथ र सहयोग पाएका छैनन् । सायद यही कुरालाई मनन गरेर पो हो कि तपाईंजस्तो कैयौं राजनीतिक दलहरुले त आफ्नो घोषणापत्र मार्फत् अब कहिल्यै बन्द नगर्ने प्रतिवद्धता समेत जाहेर गरिसके ।
यो किन बुझ्नुहुन्न तपाईंहरु बन्द कहिल्यै कुनै पनि समस्याको समाधान होइन भनेर । यो कुनै पनि कुराको विकल्प पनि होइन भनेर । एजेण्डा जुनै थरिको उठाएपनि आखिर बन्द भनेको बन्द नै हो । यदि तपाईं एउटा सफल नेतृत्व लिन चाहनुहुन्छ भने अब यस्ता संकुचित विचारहरुबाट बाहिर निस्कनु जरुरि छ । बन्द सदाको लागि बन्द गर्नु जरुरि छ ।
सडकमा उत्रिदैंमा समस्याको समाधान हुँदैन बन्दकर्ताज्यू ! झन् बदनाम भईन्छ । नबिर्सिनुहोस् बन्द न गराउनेलाई लाभदायक छ न सास्ती भोग्ने नागरिकलाई । त्यसैले, अब यसको विकल्प रोज्नुहोस् तर रोज्दा यस्तो रोज्नुहोस् कि अबदेखि बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना समेत नहोस् ! बरु छलफल गर्नुहोस्, संवाद गर्नुहोस् तर यी अनेकौं थरिका बन्दले कृपया हामीलाई दु:ख नदिनुहोस् ।
Viewsनेपाल, नेपाल बन्द, बन्द, बन्दको विकल्प, featured, Nepal, Nepal Bandh, Strike, Tanneri Chaso, Youth
← दिएर कसैलाई पनि पुग्दैन
सार्वजनिक सेवाको पहुँचमा किन यस्तो सास्ती ? →